မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: သိရင် ပြောကြပါရှင်...
Posted by mabaydar at 1:14 AM
spirit drum small wind, prawn hand bone (နတ်စည်ငယ်လေ ပုဇွန်လက်ရိုး) ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်။ :D
ဒါနဲ့ အောက်က လင့်ခ်ကလေးတော့ ရှာတွေ့တယ်။ အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။
သူလုပ်မှ ပိုဆိုးကုန်ပြီး... spirit drum small wind, prawn hand bone.. hahaha lolz.. အကောင်းပြောနေတာ.. ကူညီအုံး.. ကိုဇက်တီက ရှေ့မှီ နောက်မှီဆိုတော့.. အားကိုးပါတယ်..
အစ်ကိုပေးတဲ့ လင့်ခ်က အတော်အသုံးဝင်တယ်.. သကြားနဲ့ အသူရာ အကြောင်းတော့ တစေ့တစောင်း သိသွားပြီ... ကျေးဇူး.. သီချင်းဘာသာပြန်ပေးမဲ့သူရှိရင်ကောင်းမယ်..
6/10/2009 2:43 AM
အကောင်းဆုံးကဒေါ်မာမာအေးကိုမေးကြည့်ပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် မိုးမခမီဒီယာကတဆင့်ဖြစ်ဖြစ် bbc ကတဆင့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
6/10/2009 2:44 AM
ဗမာလိုကို နားမလည်တာပါ... နို့မို့ဆို ကူညီတယ်...
ပုဇွန်လက်ရိုးအား လမ္ဗသာ = ဒါတော့ မသိဘူးဗျ
ကျော်ဝန်းသံသာ.. ဆော်ရွန်းညံစာစာ = (ဆော်ရွန်း = တီးခတ်) အရပ်တခွင်လုံးကို ကျော်လွှား ဖုံးလွှမ်း ရောက်လာတဲ့ စည်တီးသံက ညံနေပါတယ်။
တိမ်ယံအာကာ နီလာပြင်ဆိုင်း ထင်တိုင်းခြုံလွှာ = တိမ်တွေရှိတဲ့ ကောင်းကင်ရဲ့ အပြာရောင်ပြင်ဟာ ခြုံလွှာတခုလို အုပ်မိုးနေသယောင်ထင်ရပါတယ်။
မိုးထက်ကယ်ဝဋ္ဌာ ကိုးချက်နယ်မှာ = မြေပြင်ပေါ်က အရပ် ရှစ်မျက်နှာနဲ့ အထက်အရပ်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင်ကိုပါ ပေါင်းလိုက်ရင် ကိုးချက်နယ် (အရပ်ကိုးမျက်နှာ) ရှိပါတယ်။ အရပ်ကိုးမျက်နှာဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင် ပါ။
ပင်လုံးညွတ် သခွပ်ပွင့်ချိန်ခါ... = သကြားမင်းဖက်က စစ်မက်အင်္ဂါတွေပါ
စစ်ဦးစီးက ဆင်တော် သုမိတ္တာ
စစ်အင်္ဂါလေးပါး = ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ရထားတပ်၊ ခြေလျင်တပ်
ဘာသာကတော့ မပြန်ချင်ဘူးဗျ တော်ကြာ တလွဲတွေ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ အဟဲ
6/10/2009 5:06 AM
ဗေဒါပျံအတွက် ကျနော်မှတ်သားထားတာလေး မျှဝေပါရစေ။ သိပီးသားတွေက များမှာပါ။ ဗမာသားကလဲ မြန်မာကို ဘာသာပြန်ပီးပီဆိုတော့ ကျနော်က တခြားဟာပဲပြောမယ်ဗျာ။
(၁) အာလမ္ဗ-ဆိုတာ ဆွဲကိုင်၍ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ပုဇွန်လက်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိ အရိုးတပ်ထားတဲ့ စည်ရိုက်တံကို ဆွဲကိုင်ပြီး နတ်စည်တော်ကြီးကို ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ အသံတွေဆူညံသွားတာကိုဆိုလိုပါတယ်။
(၂)ပိတောက်ပန်းပွင့်တဲ့ရာသီရောက်ရင် အဝေးရောက်ရွှေမြန်မာတွေ ကိုယ်ပြည်ကိုယ်လွမ်းသလို အသုရာနတ်တွေလဲ သခွပ်ပန်းပွင့်တဲ့အခါသူတို့နေခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာဟောင်းကို လွမ်းကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နေရာဟောင်းကို သိကြားခေါင်းဆောင်တဲ့နတ်မင်း(၃၃)ပါးက သိမ်းပိုက်ထားလို့ မကျေမချမ်းတွေဖြစ်ရတဲ့အထဲ သိကြားက လူလည်ကျပြီး ဝေပစိတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ အသုရာနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးတော်သုဇာကိုပါ ခိုးပြေးတော့ အသုရာနတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ သိကြားအပေါ်စိတ်နာကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပန်းပွင့်တဲ့ရာသီရောက်လို့ နေရာဟောင်းကို လွမ်းဆွတ်ရာကနေ အတိတ်ကို သတိရပြီး ဒေါသတွေဖြစ်၊ နာကျည်းချက်တွေပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ စစ်တိုက်ဖို့ပြင်ကြတာ။ နဖူးကအနာရွတ်ကို စမ်းမိတိုင်း ကေဋ၀တ်ပုဏ္ဏားခမျှာ မဟောသဓာကို နာကျည်းသလို အသုရာတွေလဲ သခွပ်ပန်းပွင့်ရာသီရောက်တိုင်း နတ်တွေကို နာကျည်းကြသတဲ့ ဗေဒါပျံရေ့။
(၃) နောက်ပြီး သိကြားနဲ့ အသုရာနတ်တွေရဲ့ စစ်ပွဲက သမက်နဲ့ ယောက္ခမတို့နှစ်ဦးအကြားဖြစ်ပွါးတဲ့ စစ်ပွဲပဲ။ သိကြားက အသုရာနတ်မင်းရဲ့ သမီးတော်ကို ခိုးယူထားတာမို့လား။ သိကြားကလဲ သူလိုချင်တာရှိရင် ဇွတ်--။ နေမကောင်းဘူး-ပြောလဲ မရဘူး။ အတော်ဆိုးတဲ့ သိကြား။
(၄)တကယ်တော့ အဲဒီစစ်ပွဲကို သိကြားကိုယ်တိုင်မတိုက်ပါဘူး၊ သိကြားက အစကတည်းက အစီအမံတွေလုပ်ထားတာ။ အသုရာတွေလာရာလမ်းမှာ နဂါးတပ်၊ ဂဠုန်တပ်၊ ဂုမ္ဗဏ်တပ်၊ ဘီလူးတပ်၊ တဓရဋ္ဌ၊ ၀ိရူဠှက္ခ၊ ၀ိရူပက္ခနဲ့ ကုဝေရဆိုတဲ့ အောက်စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်က နတ်မင်းကြီးလေးပါးတပ်တွေကို အဆင့်ဆင့်ချထားတဲ့အပြင် အမှတ်(၉)တပ်မအဖြင့် ၀ရဇိန်လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့သိကြားရုပ်ကို စစ်အင်္ဂါလေးပါးအခြံအရံနဲ့ ဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတယ်။ အသုရာနတ်တွေ စစ်လာတိုက်တဲ့အခါတိုင်း အောက်ကတပ်မရှစ်ခုကို အနိုင်ရပေမဲ့ နောက်ဆုံးအမှတ်ကိုး သိကြားတပ်မတော်ပုံမြင်တဲ့အခါ ပြန်ပြေးတော့တာ ဆိုပဲ။
ဒီလောက်ဆို တော်တော်ရှင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ အင်း---ဒီသီချင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရင်တော့ အရသာအတော်ပျက်သွားမှာ မြင်ယောင်မိသေးတော့၏။ ဘယ်ပညာရှိက ပြန်ဖို့ ကျိုးစားနေပါလိမ့်။
တချို့စာသားကို ဗမာလိုတောင် အတိအကျ မသိတာ ဘာသာပြန်ဖို့ဆိုတာ.... ဟီးးးးးးးး သဘောပေါက်တယ်နော်
း) မကြီးဗေဒါ ကျနော် သဘောမပေါက်ပါ။ ဟီးးးးး
ကိုမင်းထက်... အဖြေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... အသုံးလဲဝင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ နံပါတ် (၂)အချက်ကတော့ မဗေဒါ သိသလောက်နဲ့ နဲနဲကွဲနေတယ်.. မဗေဒါသိထားသလောက်... သခွပ်ပန်းက နတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပန်းမဟုတ်ဘူး... သူစစ်ရှုံးလို့ နေရတဲ့ ပြည်မှာပွင့်တာလို့ထင်တာပဲ... အသူရာက သောက်စားမူးယစ်တတ်တဲ့ အောက်နတ်မျိုးဆိုတော့ သူစစ်ရှုံးလို့ ရှုံးမှန်းတောင် မသိဘူး.. သူရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ သခွပ်ပန်းပွင့်တော့မှ ဒါဟာ မြင်းမိုရ်မဟုတ်ပါလားဆိုပြီးသိတော့ ဒေါသထွက်ပြီး စစ်ပြန်သွားတိုက်ပြန်တာ.. အဲဒိအကြောင်းကို သီချင်းထဲမှာလဲ ဒီလိုဆိုထားတယ်..
" ကသစ်ပန်းပွင့် ရတုဖြာ.. သဘင်ပွဲ အပြုမှာ..
သြော် သခွပ်ဖြူလွှာ အပွင့်ကိုသာမြင်တော့မှ..
၀တိံတွင် မဟုတ်ပါလား ဟရို့ရဲ့ "
လို့ ပါတယ်လေ... အဲခုမှ သတိထားမိတာ.. ကသစ်ပန်းက ပါလာပြန်ပြီ... ဒါဆို ကသစ်ပန်းက နတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပန်းပေါ့နော်.. ဟုတ်လား..
ကိုဇက်တီကြီးပေးသွားတဲ့လင့်ခ်မှာ သွားဖတ်ကြည့်တော့ လက်ပံပင်ပါ တိုးလာတယ်... ရှုပ်ကုန်ပြီ... အတိအကျတော့ သိချင်တယ်.. ဒီဟာကို ပြဇာတ်လုပ်လိုက်ရင် အန္ဒိယက ရာမာယဏ ဇာတ်တော်လို ပေါက်ချင်ပေါက်သွားအုံးမယ်.. အဟိဟိ...
" မာဃ တို့ က သေတာနဲ့ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်ကို ရောက်တော့ အသူရာတွေက မူးနေကြတယ်။ အမူးသမားတွေနဲပတော့ အတူ မနေနိုင်ဘူး ဆိုပြီးတော့ ဒီကောင်တွေကို မြင့် မိုရ်တောင်ခြေ ပင်လယ်ကမ်းစပ်က လက်ပံတောကို ပစ်ချလိုက်ကြတယ်။ အသူရာ နတ်တွေ အမူးပြေတော့ ပင်လယ် ကမ်းစပ်၊ ဆားငံရည် နဲ့ ဆားနံ့ တွေ ကို ရတဲ့ အခါ ၊ တနည်း ဆားဓာတ်ပါတဲ့လေတွေ တိုက်တဲ့ အခါ သူတို့ ကိုယ်မှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ပြီး အားလုံး အမူးပြေလာကြတယ်။
ဟာ…ဒါငါတို့ နတ်ပြည် မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ကောင်တွေ တို့နတ်ပြည်ကို လုသွားလဲ ...ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ မာဃတို့ကို တွေ့တာပဲ ။ ဒါနဲ့ လူစုပြီး ( အဲ..နတ်စုပြီး) စစ်ပြန်လာတိုက်တယ်။ မာဃတို့က သတိရှိတော့ သူတို့ ပဲ ရှုံးတယ်။ ဒါနဲ့ ပဲ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ မြင်းမိုရ်မှာတင် သောက်ကြ ၊ အိပ်ကြပြန်တယ် ။ နောက် လက်ပံပွင့်ချိန်မှာ ပြန်လာတိုက်ပြန်တယ်။ "
ကဲ.. ရီပလိုင်းမျှော်နေမယ်နော်.. အဖေရန်ကုန်ပြန်သွားလို့ပေါ့ကွာ... မဗေဒါ ဖေဖေဆိုရင် သိမှာ...
ခုလိုလာရောက်ဖြေကြားပေးတဲ့.. ကိုဗမာသား ကိုမင်းထက် နှင့်တကွ ကောင်းနိုးရာရာ အကြံဥာဏ်များကို ပေးကြသော.. balar ဆီပုံးမှာ ပြောသွားသော သူငယ်ချင်းများ...
လာရောက်ဖတ်ရှုသွားသော မောင်... ကိုဟတ်ကြီး.. တောင်ပေါ်သား.. အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..
မသိပင်မဲ့လဲ ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ကျမတို့မြန်မာတွေရဲ့ ရှေးယခင် အကြောင်းတွေကို လေ့လာခွင့်ရှိသွားတယ်.. စာဖတ်သူအတွက် အသုံးကျသွားတယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ်..
တတော ပဋ္ဌာယ စိတ္တပါဋလိယာ ပုပ္ဖိတာယ အသုရာ “အမှာကံ နိဗ္ဗတ္တဋ္ဌာနေ ဒိဗ္ဗပါရိစ္ဆတ္တကဿ ပုပ္ဖနကလော”တိ ယုဒ္ဓဋ္ဌာယ သဂံ္ဂ အဘိရုဟန္တိ။
သိကြားမင်းက သုဇာခေါ် အသုရာနတ်မင်း၏သမီးတော်ကို ခိုးယူပြေးပြီးရာ ထိုအချိန်မှစ၍ သခွတ်ပန်းပွင့်သောရာသီရောက်တိုင်း အသုရာနတ်တို့သည် “ငါတို့နေရာဟောင်း၌ ပင်လယ်ကသစ်နတ်ပန်းများ ပွင့်သောအချိန်တည်း” ဟု သတိရကုန်လျှက် စစ်တိုက်ဘို့ရန်အတွက် တာဝတိံသာနတ်နတ်ပြည်သို့ ချီတက်ကြကုန်၏။
(ဓမ္မပဒဋ္ဌကထာ၊ အပ္ပမာဒ၀ဂ္ဂ၊ မဃ၀တ္ထု)
ဇာတ်လမ်းကိုတော့ မဗေဒါသိပြီးသားနော်။ မူရင်းစာထဲမှာ တိုက်ရိုက်ပါတာကို ရှာဖွေပေးလိုက်တာပါ။ ကသစ်ပန်းပင်က တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာပေါက်တယ်။ သခွတ်ပန်းပင်က မြင့်မိုရ်တောင်ချေက အသုရာနတ်ပြည်မှာပေါက်တယ်။ မရောစေနဲ့။ စာထဲမှာ တိုက်ရိုက်မပါပေမဲ့ တတော ပဋ္ဌာယ ဆိုတဲ့ စကားကိုထောက်ပြီးတော့ သုဇာနတ်သမီးရဲ့ ကြင်ယာတော်ရွေးပွဲကို သခွတ်ပန်းတွေလှိုင်လှိုင်ပွင့်တဲ့ရာသီမှာ ကျင်းပတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တာဝတိံသာက ပင်လယ်ကသစ်နတ်ပန်းဟာလဲ အဲဒီသခွတ်ပန်းနဲ့ တစ်ရာသီတည်းပွင့်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီရာသီရောက်တိုင်း ဝေပစိတ္တိဆိုတဲ့ အသုရာနတ်မင်းဟာ သခွတ်ပန်းပွင့်တွေကို မြင်ပြီးတော့ ငါ့သမီးတော်လေးနေတဲ့ ဟိုးနတ်ပြည်မှာလဲ အခုလောက်ဆို ပင်လယ်ကသစ်ပန်းတွေ အလှိုင်လှိုင်ပွင့်နေမှာပဲလို့ ပန်းပွင့်ကိုမြင်၊ သမီးကိုလွမ်း၊ သိကြားကို စိတ်နာ၊ ပြည်ဟောင်းကိုပြန်လိုချင်-စတဲ့ရောယှက်ဝေဒနာတွေ လွှမ်းမိုးခံရပြီး စစ်တိုက်ဖို့ထထလုပ်ကြတယ်။
နောက်တစ်ခု သတိထားရမှာက ကသစ်ပန်းပင်ဟာ အသုရာနတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိကြားအဖွဲ့သားတွေ ရောက်လာမှ အဲဒီပန်းပင်က ရှေးကောင်းမှုကံကြောင့်ပေါ်လာတာ။ ထိုနည်းတူပဲ သခွတ်ပင်ဟာလဲ အသုရာနတ်တွေ မြင့်မိုရ်တောင်ခြေရောက်ပြီးနောက်မှ သူတို့ရဲ့ရှေးကောင်းမှုကံကြွင်းကြောင့် ပေါက်လာတာ။ တခြားစီပဲ။ ဒါဖြင့်ရင် မေးခွန်းတွေ မေးစရာရှိတယ်။
သခွတ်ပန်းပွင့်ကိုမြင်တာနဲ့ စစ်တိုက်ချင်တာနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ? တာဝတိံသာမှာ ကသစ်ပန်းပွင့်မှန်း သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်သလဲ?
အသုရာနတ်တွေကိုလဲ အထင်သေးလို့တော့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိကြားယောက္ခမဖြစ်တဲ့ အသုရာနတ်မင်းဝေပစိတ္တိဟာ ကသစ်ပန်းပွင့်/မပွင့်မပြောနဲ့ သိကြားမင်းရဲ့စိတ်ကိုတောင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်လောက်အောင်တန်ခိုးကြီးတယ်။
စစ်ထိုးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရတာကတော့ အထက်မှာပြောခဲ့သလို တစ်ခုကိုမြင်ပြီး အခြားနည်းတူတစ်ခုကိုသတိရတတ်တဲ့ စိတ်ဖြစ်စဉ်အရ သတိရမှုမှ လွမ်းဆွတ်မှု၊ အဲဒီကမှ နားကျည်းမှုစတာတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ယူဆပါတယ်။ နောက်ပြီး သီချင်းစာသားအားလုံးဟာ မူရင်းဇာတ်လမ်းထဲက စကားလုံးတွေကို ရေးသားဖွဲ့စီထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်ကြောင်းကိုသာ ကိုယ်ပိုင်အိုင်ဒီယာထည့်ပြီး ထွင်ရေးထားတာပါ။ ဥပမာ-မူရင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာ စစ်တိုက်သွားတဲ့အခါ ပုဇွန်လက်အရိုးတံနဲ့ စည်တီးတာတွေ ဘာတွေမပါပါဘူး။ အခြားဇာတ်လမ်းတွေထဲတော့ ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာလမ္ဗ-ဆိုတာ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေရတာပေါ့။ ပြောမယ်ဆိုရင် သီချင်းရေးဆရာက သူ့စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန့်ပြီး ရေးထားတဲ့ စာသားတွေကများပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆင်တော်သုမိတ္တာ ဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ သိကြားမင်းမှာ စီးတော်ယဉ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ဝေဇယန္တာလို့ခေါ်တဲ့ မြင်းကောင်ရေတစ်ထောင်နဲ့ဆွဲတဲ့ နတ်ရထား၊ နောက်တစ်ခုက ဧရ၀ဏ်လို့ခေါ်တဲ့ ဆင်တော်။ သုမိတ္တာလို့တော့ ကျနော်မမှတ်ဖူးဘူး။ တစ်ခုစဉ်းစားနိုင်တာက သုမိတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ဆင်ရဲနာမည်မဟုတ်ပဲနဲ့ သုနိမိတ္တာ-ကောင်းစွာဖန်ဆင်းအပ်သော-ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသလားလို့တွေးစရာရှိတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဧရာဝဏ်နတ်သားက စစ်ထွက်ခါနီး ဆင်အသွင်ဖန်းတာကို ဆိုလိုတယ် လို့ ယူဆနိုင်တယ်။
ကဲမဗေဒါရေ့ ဒီလောက်ဆို တော်ထားမှ၊ တော်ကြာ ကျနော့်ကွန့်မင့်က ဗေဒါပျံရဲ့ ပို့စ်ထက်ရှည်သွားလိမ့်မယ်။ မရှင်းတာရှိသေးရင်လဲ ထပ်မေးနိုင်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုမင်းထက်.. ခုလို လုံးစေ့ ပတ်စေ့ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်...
ညီမက သခွပ်ပန်းနဲ့ ကသစ်ပန်းရဲ့ ကွာခြားပုံကို ကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါ.. မရောပါဘူး...
ခုမေးတာက... အစ်ကို့ရဲ့ ပထမ ကွန်မန့် နံပါတ်(၂)မှာ.. " ပိတောက်ပန်းပွင့်တဲ့ရာသီရောက်ရင် အဝေးရောက်ရွှေမြန်မာတွေ ကိုယ်ပြည်ကိုယ်လွမ်းသလို အသုရာနတ်တွေလဲ သခွပ်ပန်းပွင့်တဲ့အခါသူတို့နေခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာဟောင်းကို လွမ်းကြတာပေါ့။" အဲလိုရေးသားခဲ့လို့.. သခွပ်ပန်းဟာ နတ်ပြည်မှာ ပွင့်တဲ့ ပန်းလိုလိုနဲ့ အထင်လွဲစရာဖြစ်နေလို့.. အစ်ကိုများ ရောနေသလားလို့ ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. အဟီး.. ၂ယောက်က အထင်တွေ လွဲနေကြသကိုး...
မဗေဒါရေ ဘာမှ နားမလည်လို့ ဘာမှမပြောပြ
ဗဟုသုတအလွန်ရပါတယ် ။ ကျေးဇူးပါ ။ အဲဒီလိုစာလှလှတွေကို ရေးတတ်ဖို.ဝေးစွ မနည်းဖတ်ယူရတာ( ဂလိုတော်တာ .. :P )
လိုက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူး.. memory သွားတင်ဦးမှပဲ..
ပုဇွန့်လက်ရိုး အာလမ္ဗရာ ကိစ္စကတော့ ကြားဖူးနားဝ တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာ အိုင်ကြီးဆိုလား(သေချာလိုက်ပုံ) မြင့်မိုရ်တောင် အနားကပါပဲ။ ဧရာမ ဂဏန်းကြီး ရှိဖူးသတဲ့။ အဲဒီဂဏန်းကြီး အသက်ကုန်တော့ သူ့လက်မကြီးကို ယူပြီး သိကြားမင်းတို့က စည်ကျက်ပြီး သုံးတယ်ဆိုပဲ။ အဲဒါ ပုစွန်လုံးရဲ့ လက်ရိုးကို စည်လုပ်ထားလို့ အာလမ္ဗရ ခေါ်.. ဆိုလားပဲ။
အင်း.. ခုလို သိတာကို လာရောက်ဝေမျှပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ညီမရေ..
2/06/2012 5:05 PM
2/06/2012 5:08 PM